Nepal: Rakotr’i Moriarty i Prachanda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 17:32 GMT
Democracy For Nepal (DFN) milaza fa nifampiresaka ilay masoivoho sy ireo antoko talohan'izao: Moriarty anaty Lasopy, Baburam Moriarty Debate, India, Europe, US Mitaky Antenimiera Fanorenana, Moriarty Mendrika Hohenoinareo. Ny DFN koa manana rakitsary eo amin'ny 40 minitra eo, avy amin'ny fandaharana resadresaka tao New York City nisy fandraisam-pitenenan'ilay Nepaley mpanao gazety sangany, Kanak Mani Dixit, sy ny mpamaly resaka avy amin'ny ICG, Rhoderick Chalmers.
United We Blog (UWB) manana tarehimarika vitsivitsy amin'ireo fanafihana avy eny an'habakabaka niseho tsy ela akory izay, nataon'ny Tafiky ny Mpanjaka Nepaley. Ireo mponina tsy manantsiny teny am-bohitra no mizaka ny tsy eran'ny ain'izy ireo vokatr'ireny fanafihana tsy misy dikany ireny: Fanafihana an'habakabaka: Sarin'ireo sisampaty, Ny Vokatry ny Baomba: Palpa, Bhairahawa, Sary Avy Amin'ny Fifandonana Tao Kavre.
Mero Sansar manohy amin'ny fandefasana bilaogin-dahatsary an'ilay hetsika.
Samudaya manana tantara mahaliana momba ny fanarenana indray ao anatin'ny toedraharaha taorian'ilay fifandonana. Mahabe fanantenana izany.